မေ့မရသော နီရဲရဲ မြင်ကွင်း တစ်ခု
Written by admin on Sat, 05/19/2012 - 15:00
ဒီနေ့ သင်တန်းမှာ ဆရာ က မေးသော မေးခွန်းတစ်ခုကြောင့်
ဒီ Post လေးရေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်…
ဆရာနဲ့ စကားတွေ၊ အမေးအဖြေတွေ အများကြီးပြောဖြစ်ပါသည်။
ဆရာ့ မေးခွန်းက မြန်မာပြည် ကို ပြန်ချင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဘာလဲတဲ့၊
ကျွှန်ုပ်၏ အဖြေကို သူတော်တော် စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာ အကဲခက်မိတယ်။
Read more about မေ့မရသော နီရဲရဲ မြင်ကွင်း တစ်ခု
ပြည်ဂျီတီအိုင် တွေ့ဆုံပွဲ ကျေးဇူးတင်လွှာ
Written by admin on Sun, 05/13/2012 - 13:30
၂၀၁၂ ခုနှစ်မေလ(၁)ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့ ပြည်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသားဟောင်းများ
ရဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ(စင်္ကာပူ)ကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။
ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ခန့်ထည်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများကို ကျေးဇူးပါလို့ အထူးပြောပါရစေ။
ဒီနှစ်ပွဲရဲ့ အဓိက အပိုင်းမှာဆောင်ရွက်သွားတဲ့ ကိုမျိုးမင်း(98EC) ကတော့ အစမှ အဆုံး မနားတမ်း
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားကျိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။
လိုအပ်သမျှ ဘေးတစ်နေရာက မညည်းမညူ ကူညီပေးတဲ့ ညီမငယ် နုနုဝင်း(99EC) ကိုလည်း
Read more about ပြည်ဂျီတီအိုင် တွေ့ဆုံပွဲ ကျေးဇူးတင်လွှာ
MAY DAY ပြည်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊သူ ဟောင်းများရဲ့ (၄) ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံပွဲ
Written by admin on Fri, 04/27/2012 - 15:46
၂၀၁၂ခု မေလ (၁) ရက်နေ့(MAY DAY )တွင် ပြည်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊သူ ဟောင်းများရဲ့
(၄) ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံပွဲကို စည်စည်ကားကား ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်ဝေး၊ရပ်နီး မိတ်ဆွေများ တက်ရောက်ကြဖို့ နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသား၊သူများကို register လုပ်ပြီးပါက GTI အမှတ်တရ တီရှပ်တစ်ထည်စီ
Read more about MAY DAY ပြည်ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊သူ ဟောင်းများရဲ့ (၄) ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံပွဲ
Written by admin on Fri, 04/27/2012 - 12:00
တစ်မြေထဲမှာနေပေမယ့် ဇာတိမြေသို့ ပြန်ရမည်ဆိုသော အသိက ရင်ထဲတွင် အတိုင်းမသိ ကြည်နူးဝမ်းသာစေသည်။ကျောင်းပြီးစ အလုပ်ထဲသို့ဝင် ဘ၀ကိုရုန်းကန် အချိန်တွေကို ကုန်လွန်စေခဲ့ရင်း
ဇာတိမြေကို မပြန်ဖြစ်သည်မှာကြာခဲ့ပြီ။ မိဘများမှတပါး နွေးထွေးပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုမယ့်သူမရှိသော လူတစ်ယောက်
၏ အထီးကျန်ဆန်မှုကို မခံစားချင်။အမှတ်တရများကို သတိတရ မဖြစ်ချင်၊ ရင်နင့်ခြင်းဝေဒနာကို မနှစ်မြို့ပေ။
Read more about သတိရလို့ပြန်လွမ်းမိတာပါ
The news of Saya U Than Tun ( GTI, PYAY )
Written by admin on Thu, 04/12/2012 - 04:06
The action of the Saya U Than Tun shifted from hospital to his residence in Rangon on 4th March,1912. (Wednesday). His condition is getting improvement slowly that paying medical treatment able to wait foralong time. If may like to know detail news of Saya call contact no. 0973153308.
Read more about The news of Saya U Than Tun ( GTI, PYAY )
Written by admin on Mon, 04/09/2012 - 13:20
ကျွန်တော် အခုစာရေးလို့မရဘူး စာရွက်ပေါ်ကိုလက်တင်တိုင်း ခံစားချက်တွေကင်းမဲ့နေတယ် စုစုကိုလည်းလွမ်းလို့မရ ဘ၀ကိုလည်းရေးမရ
စာမူတွေလည်း..အခန်းထဲမှာ ပြည့်နေပြီ ..အမှိုက်တွေပေါ့...ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ အသိတဲ့တစ်ယောက်ကလည်း စာမရေးတာကြာလို့ mail ပို့ပြီး
သတိပေးတယ် ..ခက်တာက အရည်ကုန်နေတဲ့ ကြံဖတ်၊အချိုမရှိတော့တဲ့ ပီကေ တစ်ခုလို နှလုံးသားကိုအတင်းစေခိုင်းမရတာခက်တယ်.....
Read more about စာမရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်းများ
ပြည်မြို့နှင့် အမှတ်တရများစွာ (4)
Written by admin on Sun, 04/01/2012 - 12:30
Fresher Welcome လို့ ခေါ်တဲ့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ သီချင်းဆိုဖို့အတွက် EC က Senior ကိုဗညားတို့အဖွဲ့၊ ကျွန်မတို့batchက ၀င်းမြင့်နိုင်တို့နဲ့သီချင်းတိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ မီမီဝင်းဖေသီဆိုထားတဲ့ အတွေးပန်းချီသီချင်းကို ဆိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့..အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်..
သီဆိုမယ်နေ့မနက်မှာ ကျွန်မ မဖြစ်စဖူး စက်ဘီးမှောက်တယ်..စိတ်ထဲထင့်သွားလို့ ကျွန်မအိမ်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ ကျွန်မအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းပဲရှိတော့တဲ့ ကျွန်မအဘိုးဆုံးတဲ့ သတင်းကို သိရတယ်..နှစ်ဘက်အဘိုးအဘွားတွေမှာ ဒီအဘိုးတစ်ယောက်ကိုပဲ ကျွန်မ မြင်ဖူးခဲ့တာ..ကျန်တဲ့အဘိုးအဘွားတွေက ကျွန်မ မမွေးခင်ကတည်းက ဆုံးသွားခဲ့ကြပြီ..
Read more about ပြည်မြို့နှင့် အမှတ်တရများစွာ (4)
Written by admin on Fri, 03/30/2012 - 11:55
Saya U Than Tun has been hospitalized for 19 days in S.S.C hospital ( Shwe Gon Daing). His condition has not improved yet. Saya U Than Tun is suffering from Neuro case that still giving treatment slowly and take time to get improvement.
Written by admin on Mon, 03/19/2012 - 04:00
ကိုအာဒံရေ...ခင်ဗျားစားပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ ပန်းသီးကြီး ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ..
ဘာလဲ.. Fruit of wisdom လေး..ဘာလေးနဲ့....
ကျုပ်သိပြီးသား.. ကျုပ်ကိုများ မအ ဘူးထင်နေသလား..
အဲလေ.. အ တယ်လို့ ထင်နေသလား..
ခင်ဗျားပန်းသီးကို ကိုက်လိုက်ပြီး မြိုချလို့ တဝက်တပြက်မှာ...
အဲဒါလေးကို အာဒံအက်ပဲလ်( Adam's apple) ဇလုပ်လို့ ခေါ်တယ်လေ...
မအေးဝကတော့ ပန်းသီးစားပြီး ရှိန်းတိန်း..ဖိန်းတိန်းဖြစ်လာပြီးမှ..
အဝတ်အစားမကပ်တဲ့ ကိုယ် အဖြစ်ကို သိပြီး သဖန်းရွက်တွေကာထားတယ်လေ..
Read more about အာဒံရယ်...စတိဂျော့ရယ်...
Written by admin on Sun, 03/18/2012 - 17:09
Saya U Than Tun has been in hospital for eight days but the condition is not quite improving.